ENGABE UQALA KANJANI UKUHWEBA ?
Ukuhweba kwi "binary options"
Qala ukuhweba ngaphandle kokulahlekelwa imali yakho yokuqala.
I AKHAWUNTI YEDEMO YAMAHHALA
INANI ELIPHEZULU ONGALENZA
iBinary options inengosi ukwazi ukukusheshisela inzuzo, ngokuphazima kweso, iphinde futhi ikhokhe Ngokushesha.
Inani ongakwazi ukuqala ngalo ulonge ukuze ukwazi ukwaz ukuzenzela inani elingafinyelela ku 1,95× wenzuzo yakho.
Uma uqagele kahle inani lwe ntengo esemgangathweni.
Engabe Kuse Mthethweni Yini Ukuhweba Usebenzisa I Binary Options ?
Abahlali base Ningizimu Afrika bavumelekile ukuthi bathenge okanye abasebenzise i binary options ngaphandle kokunqatshelwa umthetho wezwe.
Ngokungabi khona kwemithetho egunyaza Ukuhweba lokho ukwenza kungabi khona noyedwa umgqugquzuzeli okanye obekwe ngokusemthethweni ukwengamela lenhlangano e Ningizumu Afrika okwamanje. Kodwa-ke, IQ option inikeza abahlali base Ningizumu Afrika amathuba amaningi okukwazi ukuhweba besebenzisa ezobucwepheshe ngaphandle kokusaba nokukhathazeka ngomthetho wezwe.
Kubalulekile ukwazi ukuthi izinkampani zakwamanye amazwe azigunyaziwe umthetho wase Ningizumu Afrika. Lezo izinkampani zisebenza ngokulandela imithetho yakwamanye amazwe,kodwa-ke ngokulandela lemithetho yalamazwe lokho kusho ukusebenza ngobuqotho kanye nokuthembeka.
LOLU HLELO NEZINTO EZIYINGQIKITHI
Umsunguli uwine isicoco se "Best Technology Application" wahlabana nendondo ngokukwazi ukunika abahweba ithuba elihlabahlosile lokonga imali ngemibandela ewusizo omkhulu.
Abahwebi bona uqobolwabo bangakwazi ukuthi bakhethe eningini futhi ngokuthi bafuna ukonga malini kusukela kwi dola esisodwa $1. Ibhalansi enomphumela omubi ayihlinzekiwe ukuze ivikele umhwebi ukuthi ngalahlekelwa.
Izindlela Ezihleliwe Zokulungisa
Unikezwa indathane yezinhlelo zokulungisa lokhu, okuthinta kona kokubili ukuhlela kanye nokuqonda izinsiza ukuze ukwazi Ukuhweba futhi kube usizo olukhulu kuwena.
Izinhlelo ezingu 40+
Ziningi izinhlelo ezengeziwe ezikwazi ukusetshenziswa ngu umhwebi njenge "awe-aspiring." Lena indlela enhle kakhulu yokuhweba nge binary option. Namuhla, izinkampani zinikeza izindlela eziyi 40 ongakwazi ukukhetha kuzo. Lokhu kubala ezezimali zamazwe, imali mboleko, Istokwe, izimpahla Kanye nezinye izinhlelo.
Lapha siyakuqinisekisa ukuthi uzokwazi ukuthola indlela ozoyithanda futhi uyiqonde kakhulu kunazo zonke ezinye ozokwazi ukuyilandela uphinde futhi ukwazi nokubona umnyakazo wentengo.
AKUKHO UKUSHINSTSHA NOMA IKHOMISHINI
Uma Uvula Uhwebo
I-IQ Option Ngezinombolo
Mayelana ne Binary Options
Leli gama elithi "Binary Option" lisetshenziselwa ukuchaza umkhiqizo othize we mali, okusho ukuthi ivumela umhwebi enze inzuzo yemali uma inqobo uqagele ukuthi uhwebo luzofinyelela kwi kwicashazana engu "Yebo" noma "cha" kwi ngqikithi. Kuba nezikhathi lapho uhwebo luzihlela ngokwalo ukuthi libe sesigabeni esihle sokuzenzela inzuzo ngokuthi ulandele/ wazi ngezimo zomnotho wezwe, lokhu kungaba izimo ezinhle noma izimo ezimbi uphinde futhi uzijwayeze ngokulandela wazi kabanzi nangeminotho yakwamany amazwe.
Engabe Ngingafunda Kanjani Nge Vending Binary Options ?
Ngenhloso yokwazi lokhu, ungafaka isicelo sokuba ukwazi ukuthola inhlolokhono ye akhawunti yamahhala, kanti lenhlolo khono yamahhala uyinikezwa izinhlobo ezining ze binary options brokers. Kanti uthole ukwazi olunzulu nge IQ Option, ukuqeqeshelwa lesisifundo kubandaka usizo lokwakha iprofayela yakho njengo mhwebi.Ziningi izinsiza ezingakusiza njengohlelo lama shadi, izinkomba zobucwepheshe kanye namanye amathuluzi angsakwazi ukukusiza ubheke umnyakazo wezezimali emakethe.
Kukhona izingqungquthela ezibanjwayo ezifundisayo futhi kukhona nezindaba ezihlelelwe ukuchaza kabanzi kube lula ukuziqonda neziphinda zibe usizo kunoma imuphi umhwebi. Kubalulekile nokuzijwayeza ukuzifundisa kuzinhlolokhono zethu zamahhala izindlela eziningi zokuzenzela imali — futhi ugcine usungu cwepheshe omkhulu kwi binary option.
Engabe Imalini Engingakwazi Ukuyonga?
Ocwepheshe bayaye baluleke ngokuth wonge imali ongeke neze wayikhalela umakwenzeka icwila noma ungenzi nzuzo kuyo. Lokhu ku siza kakhulu kanti futhi kuyiyona ndlela evikela ngayo umhwebi ekuhwebeni. Uqaphele ungalinge uzibeke engcupheni ngokuhweba ngemali obuyigcinele ezinye izidingo zakho eziseceleni- kubalulekile ukuyisebenzisela izidingo zakho njengoba bewuhlelile. Uma usebenzisa imali obuyigcinele ezinye izidingo zakho kukubeka engcupheni yokulahlekelwa imali yakho ubuyigcinile uphinde uhluleke nokwenza izidingo zakho kubalulekile.
Kodwa uma unemali eziseceleni engenazo izidingo ngizihlalele, lena indlela okanye icebo elihle kakhulu ukuthi uyonge nge binary options. Inqobo nje, kumele uzinike ithuba, ubuke amavidiyo afundisa ngokuhweba uphinde futhi uthethe iskhathi uzifindise kuzinhlolokhono zethu zama akhawunti angakhokhelwa. Emva kwalokho usungaqala ukufaka imadlana encane onayo uzizamele kwi binary options strategy.
Ingabe Iziphi Izinsiza Ezisiza Uma Uhweba Nge Binary Options?
Ukuze ukwazi ukuthi phumelele ngokushesh, unga fake isicelo kuzi ngxenye ezahlukahlukene izinkomba zobucwepheshe "technical indicators" kanye nama "widgets". Ukuze ukwazi ukuhlala uqaphele kwezezimakethe ufunda usizo lwe "Moving Averages, Bollinger Bands, RSI, MACD, Parabolic SAR," Kanye nokunye. Kubalulekile futhi ukuthi uhlale uqaphile nezindaba ezithinta ezezimakethe kanye nezindaba ezithinta umnotho waza mazwe ngamazwe. Lokhu kwenza kubelulula nokuqagela yentengo yezezi mali uma sewuqala uhweba.
Iningi labahwebi asebe mnkantshubovu backwash you phinda phinda inzuzo yabo ngokusebenzisa i "Stochastic Kanye ne Awesome Oscillators". Umgqugquzeli uvumela abasenzisi ukuthi bekwazi ukuqhathanisa isivikeli esithize esisuke sibekelwe isikhathi esikhathi esithize."Awesome Oscillators" loluhlelo lusiza ekutheni ukwazi ukubona ukuntengantenga Kanye namandla esitokwe okanye imali yakwamanye amazwe. Lezo zinkomba zikwazi ukukala amandla ezezimakethe ziphinde futhi zibonise izintengo ezisemgangathweni/ ezingondaba uzekwayo ngaleso sikhathi. Lokhu kuphinda kusize ngokwazi ngokuthuthuka okukhona kwezezimakethe.
Engabe Okwamanje Lithini Futhi Ngokuzayo Lizothini?
Inani okwamanje uma ulibala nge binary option liyintengo eliyilo ngaso lesi sikhathi, lokhu kusho ukuthi liyilo inani leli olibona ngayo. Uma umhwebi eqala engena emakethe, uzobona inani langaleso sikhathi sentengo. Kodwa-ke, lokhu kusho ukuthi kumele azi ukuthi kunesikhathi esibekiwe nokungenzeka ukuthi leso sikhathi esibekiwe kungenzeka ukuth sese dlule kunaleso esiyiqiniso ebesibekwe ngu msunguli okanye umgqugquzeli.
Lesi singathekiso esithi 'strike price' sichaza inani langaleso sikhathi okusuke umhwebi engena ngaso enza okanye eqala ukuhweba. Lesi singathekiso sihlukile kunalesi abasibiza ngokukuthi 'basic price'. Leligama elithi "strike cost" singalichaza ngezindlela ezahlukahluken siphinde silisebenzise kulemisho:
Kwezezimali. Lisho ukuthi imakethe imakethe engaphezulu lapho ukwazi ukubona inani lentengiso.
Ngaphandle kwe mali. Lokhu kuchaza nge nani elingezansi kwntengiso..
Abangena kumele balale bekuqaphela lokhu kuhlobana phakathi kwawo womabali lawa ma binary options values:
Uma ngaleso sikhathi inani lwentengiso engaphezulu iveza ukuphelelwa isikhathi , umthengi uyayithola inzuzo.
Uma inani le makethe lihleli okanye lingezansi kwentengo,lapha umdayisi uzenzela inzuzo kepha umthengi akatholi lutho.
Engabe Iziphi Izinzuzo Zokusebenzisa i Trading Binary Options?
Lolu hlobo lokonga imali luya ngokuya liba semgangathweni eNingizimu Afrika nakwezinye izindawo ngalezi zizathu ezilandelayo:
Iningi inzuzo eyenzekayo ngayo lendlela yokonga imali. Binary options inama thuba-ayikho ngokwendalo; lokhu kusho ukuthi, nama thuba okuzenzenela inzuzo eningi makhulu kakhulu. Kubalulekile lokhu ngaphezulu wezezimali nginikeza inzuzo eqala kwengamashumi ayisishagalombili kuya kwengamashumi guardianship lunye yamaphesenti (80%-90%).
Ukufaka Engcupheni. Wonke umhwebi uyazi uma uhweba usuke enomqondo ocacilele ukuthi imalini ayifakayo nokungenzeka ibuye nokungenzeka ingabuyi,uma ibuya inzizo yakhona izobe ingakanani uma kwenzeka ewuthola lomkomelo. Kant abukho ulungise uma kwenzeka umhwebi efuna ukufaka imali ethe xaxa kunaleyo ajwayele ukuyifaka uma ehweba.
Kulula uku hweba. Binary option asebenzisa indlela elula engekho nzima uma kuwena nge Forex. Okumele ukwenze ukuze ukwazi yokuzenzela inzuzo ukuthi ukwazi ukubacela kahle phakathi kwimiphumela emibili.
Uzenzela Inzuzo Ngokushesha. Binary options injured indlela esheshayo yokuzenzela inzuzo, ngokuphazima kweso,indlela elula ekhokhayo. Isikhath esibekelwe loluhlelo yomkhiqizo wezezimali kuvamise ukuthi kube ihora noma ngaphansi kwe hora. Abaning abahwebi abahweba nsuku zonk bavamise ukuhweba imizuzu elishumi nanhlanu kuya kwengama still amathathu (15-30 minutes)
Ukwenza isinqumo esilungile uma uhweba. IQ Option, ukwenza isibonelo, ikunikeza izindlela ezining kwengamashumi amane nesithupha (46) ukuthi ukwazi ukinga. Lokhu kukubeka amathuba amaningi yokuzenzela umnotho, I do kwazi ukubona uma usengqcupheni uphinde ukwazi ukubhekana naso leso simo ngawo lowo mzuzu.
Ukuze ube ngu mhwebi ongungoti nophumelele, kudinga ukuthi uphinde ube mnkantshubovu. Kumele uqonde ukuthi ukonga okufana nalokhu kuhambisana nokuthi ube ngumuntu enesibindi okwazi ukuthatha izinqumo ezinqala.
Nokuzijwayeza nge akhawunti yeDemo ikusiza kakhulu ukuthi ufunde futhi uqonde yonke imigudu le ngaphandle yokulahlekelwa imali.
Binary Options. Engabe uqala kanjani ?
AMAVIDIYO ENGEZIWE →
Ukufaka Imali Kanye Nezindlela Zokukhipha Imali
Imithombo yethu ivumela ukusetshenziswa kwe khadi lase bhange (1-3 wezinsuku) e- wallets (1-3 wezinsuku) kanti i wire- transfer zona (1-7 wezinsuku) wokufaka noma ukukhipha imali.
Isatifiketi soKhuseleko lweSSL oluyi-100%
Vavanya iqhinga lakho lokutyal' imali ngeakhawunti yedemo yasimahla
Iinkonzo zezemali ezibonelelwa yile webhusayithi zinezinga eliphezulu lomngcipheko kwaye zingaba neziphumo zokulahlekelwa yimali yakho yonke. Ungaze utyal' imali ongenakumela ukuba uphulukane nayo
Yazi ngakumbi malunga nokurhweba nge-intanethi kunye namaqhinga ahlukeneyo okurhweba Hlal' uthe qwa unolwazi malunga neendaba zezemali kwihlabathi — joyina amajelo onxibelelwano woluntu lwethu.
HLAL' ULINDILE _
VULA I AKHAWUNTI
ISilumkiso soMngcipheko Jikelele :
Iinkonzo zezemali ezibonelelwa yile webhusayithi zinezinga eliphezulu lomngcipheko kwaye zingaba neziphumo zokulahlekelwa yimali yakho yonke. Ungaze utyal' imali ongenakumela ukuba uphulukane nayo.
yokuhweba nge Forex